Monday April 01, 2019 - 12:02:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Masjid iyo Madaraso lagu barto Qur'aanka oo kuyaala dalka Ingiriiska ayaa markii labaad weerar la kulmay weearkaas oo ay fuliyeen Kooxo gaalo cunsuriyiin ah waxa ayna burbur u geysten qeyba kamid ah Masjidka, halka sidoo kalena ay Jeex Jeexeen K
Masjid iyo Madaraso lagu barto Qur'aanka oo kuyaala dalka Ingiriiska ayaa markii labaad weerar la kulmay weearkaas oo ay fuliyeen Kooxo gaalo cunsuriyiin ah waxa ayna burbur u geysten qeyba kamid ah Masjidka, halka sidoo kalena ay Jeex Jeexeen Kitaabadii Qu',aanka ee halkaasi yiilay.
Dhacdaday ayaa ka dhacday magalada New Castle ee dhacda waqooyi bari ee dalka Britain waxayna noqoneysaa middii labaad oo Bishii dhamatay gudaheeda ka dhacda wadankaas xilli Necebka loo qabo Musliminta iyo Tacadiyada loo geysanayo ay sare usii kacayaan.
Gaalada Cunsuriyinta ah ee weeraray Masjidka ayaa tiradooda lagu sheegay illaa 6 qof oo dhammaantood rag aha waxayna burburiyen Al Babadi iyo daaqadihi Masjidka kadibna waxay gudihisiisa ku daadiyeen Maaddooyin kasameysan waxyaabaha holca kuwaas oo ay ku doonayeen in ay Masjidka ku gubaan balse taasi uma suurta galin.
Dadka deegaanka ayaa la shegay in ay Police-ka la xiriireen kadib markii gaaladan ay weeraren Masjidka durbana waxaa goobta soo gaaray ciidan Police ah kuwaas oo gacanta kusoo dhigay gaaladi weerartay Masjidka ay muslimintu leeyihiin.
Wararku waxay sheegayaan in ragga weerarka qaaday ay katirsanaayeen gaalada xagjirka ah ee ku dhaqan dalka Ingiriiska, intii ay Jeex Jeexayen Kutubta Qur'aanka ayna ku tacadinayeen Masjidka ayay ku qeylinayeen ereyo muujinaya karahiyada ay u qaban Islaamka iyo Musliminta halka sidoo kalena Hareeraha Masjidka ay ku qoreen Islaamku waa Argagixiso.
Dhacdadan ayaa kusoo aadeysa 3 isbuuc kadib markii gaal Xag jir ah uu weerar ku qaaday Masajid ay ku cibadeysanayen dad muslimin ah oo ku yaala wadanka New Zealand, halkaas oo u ku dilay in ka badan 50 qof tiro intaas kabadana ay dhaawacyo kasoo gaareen.
Kacdoonka ay dhigayaan Shiicada dalka Ciraaq oo xoogaystay.
Dowladda Suudaan Oo Yahuudda ugu baaqay in ay dalka dib usoo laabtaan Kaniisadana ka dhistaan!,
100 qof oo ku dhintay Duqeyn ka dhacday bartamaha dalka Yemen.